Torres Oo Aqbalay In uu sii Joogo Garoonka Anfeld | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Diego Forlan oo Qaatay Kubada Dahabka Ama Laacibka Aduunka
Ramires Oo Lacag Badan ay kala soo baxday Chelsea Fc →
Torres Oo Aqbalay In uu sii Joogo Garoonka Anfeld
Torres oo 26 jir ah ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu ka hoos cayaaro tababaraha cusub ee Liverpool Roy Hodgson.
Cayaaryahankaan ayaa lala xiririnayay kooxo ay kamid yihiin Chelsea iyo man City kuwaas oo u hanqal taagayay in ay helaan ku guulaystaha koobka adduunka.
�waxaa diyaar u ahay in aan u sii cayaaro kooxda ayuu u sheegay Torres Websedka kooxda Liverpool.
Wuxuu intaa raaciyay Torres in uu wali daacad u yahay kooxda iyo taageerayasha si lamid ah markii aan kooxdan kuso biirayay.
Xidiga caalamiga wadanka Spain Fernando Torres ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Liverpool isagoo xulkiisa uu la qaaday koobka adduunka.
Si kastaba Torres oo haatan kazoo kabanaya dhaawac soo gaaray kulankii Finalka koobka aduunka ee Holland ay kaga horjeedeen ayaa ku faraxsan in uu dib ugu soo laabto kooxda Liverpool.
�aad ayaa ugu faraxsanahay in aan dib ugu soo laabto kooxda dhab ahaabtii waa ku faraxsanahay in aan la joogo xidigaha aan isku naadiga nahay ayuu yiri Torres.
Kooxda Liverpool ayaa xiligii dhamaaday waxay ku dhamaysatay kaalinta 7-aad horyaalka Ingiriiska iyadoo ku guul dareysatay in ay qaado wax koobk ah waxaana xiliguu tagay tababare u ahaa Rafael Binitez kaas oo faro marnaan ku dhamaystay isaga iyo Liverpool.
Torres ayaa sheegay in kooxda Liverpool ay u baahan tahay in ay lasoo saxiixato ugu yaraan saddex ama afar cayaaryahan oo tayo leh.
Liverpool ayaa lasoo saxiixatay Joe Cole iyo weeraryahanka wadanka Serbia Milan Jovancoic,iyo daafac lagu magacaabo Danny Wilson halka ay isaga tageen Yossi Benayoun oo Chelsea ku biiray iyo Mascherano oo lagu wado in uu ka tago kooxda.
Tababaraha kooxda Liverpool Roy Hodgson ayaa waxaa uu si weyn ugu hanqal taagayay in uu sii joogo kooxda weeraryahankii hore ee kooxda Atletico Madrid Torres wuxuuna doonayaa in uu qeyb ka noqdo qorshaha uu ku doonayo in uu qaado horyaalka Ingiriiska isla markaana guulo kale uu gaarsiiyo kooxda.
�naadigaan waa tan ugu wanaagsan dalkan Ingiriska sidaa darteed rajadeena waa mid wanaagsan heer sare ah ayuu yiri Fernando Torres oo Liverpool kusoo biiray bishii July sanadkii 2007 kadib markii ay kazoo iibsadeen kooxda Atletico de Madrid.
Rajadeena waa mid sare waxaana doonaynaa in aan u dagaalanno horyaalka xiligii lasoo dhaafayna wuxuu ahaa xilli adag laakin xiligaan waa in aan samayno wax wanaagsan ayuu yiri Torres.
Torres oo booqasho ku tagay dalka Spain kadib markii ay ku guulaysteen koobka adduunka ayaa tababare Hodgson uu dadaal u galay sidii uu ugu dhaadhicin lahaa Torres in uu sii joogo naadiga
Amina Ali Omar
Comments Off on Torres Oo Aqbalay In uu sii Joogo Garoonka Anfeld
Posted by Mohamed Tollman on August 6, 2010 in Uncategorized